12 Zvinhu Zvaunofanirwa Kuita Mushure mekunyora iyo Blog Post
Yako Blog Post Yekusimudzira Yekutarisa
Mugovera, December 22, 2012 Douglas Karr
Isu takanyora yakadzama chinyorwa nezve maitiro ekuita gadzira yako inotevera blog blog. ichi infographic kubva kuDivvyHQ, pepanhau-yemahara yekunyora kalendari application, inofamba nematanho ekusimudzira zvemukati zvako mushure mekuburitswa.
Chinhu chega chandiri kuzeza nacho kukumbira mamwe mabloggi kuti asimudzire zvemukati. Kana iwe ukanyora zvakanaka zvemukati, mamwe mabloggi chido share it… ndinonzwa sekuti hazvina hunhu kungobvunza. Ndingatsiva chinhu ichi ne kubhadhara kubhadharwa. Uchishandisa StumbleUpon Ads, Outbrain, kana imwe sisitimu inogona kuita kuti zvemukati zvionekwe uye zvigovaniswe.
Tags: blog post kukurudzirablog kusimudzirakukurudzira blog postkusimudzira yako blog positi
Nyika yeSocial Media 2012
Yakakwana Dhata haina Kukwanisika
Mbudzi 17, 2016 na10: 40 PM
Pane nzira here yekudhinda ino graphic? Ndinoda kuzvichengeta pandinotumira.
Mbudzi 19, 2016 na9: 47 PM
Zvichida kungodhinda iyo graphic chaiyo, wobva CTRL-P kudhinda! Ndakagadzira chinongedzo ipapo kuti ndivhure muhwindo idzva.